Xildhibaan Muuse Suudi “Waxaa lana yiri hubka iska dhiga,oo ku soo biira siyaasada, balse waxaa hadda muuqata in dalka uu gumeysi ku jiro” sidaa waxaa ku calaacalay Muuse suudi. | Anti-Tribalism
← Xildhibaano sheegay in Qaramada Midoobay, urur goboleedka IGAD iyo Midowga Afrika ay ku xad gudbeen Qaranimada Somalia
Jen. Indhacadde oo si kulul uga jawaabay digniin ay shalay si wadajir ah u soo saareen Midowga Afrika, IGAD iyo QM →
Xildhibaan Muuse Suudi “Waxaa lana yiri hubka iska dhiga,oo ku soo biira siyaasada, balse waxaa hadda muuqata in dalka uu gumeysi ku jiro” sidaa waxaa ku calaacalay Muuse suudi.
02.05.2012 –Xaalad siyaasadeedka magaalada Muqdisho ayaa waxay maraysaa halkii ugu xumeyd kadib markii beesha caalamka ay u hanjabeen dad ay ugu yeereen qaswadayaal ay horboodayaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka.
Xildhibaan Muuse suudi oo xilli soo noqonday hoggaamiye kooxeed ayaa muddooyinka danbe waxa uu u jiheystay dhinaca siyaasada,waxuuna ka mid noqday xildhibaanada ugu firfircon marka laga hadlayo xaalada uu dalka ku sugan yahay. Xildhibaan Muuse suudi,Xildhibaan Cusmaan caato,Xildhibaan Cawad cashara iyo Xildhibaan Cali Maxamuud (Cali Seeko) ayaa beesha caalamka iyo dowladda KMG soomaaliya ku eedeeyeen in dalka soomaaliya ay la damacsan yahiin gumeysi cusub.
Beesha caalamka iyo Dowladda KMG Soomaaliya ayaa waxaa ka go’an in la meelmariyo dastuurka lagu muran sanyahay,waxana ku goodiyeen in la ciqaabi doono cidii ishortaagta.
Iyadoo Inta badan caadiyan ah in Mudanayaasha baarlamaanka ay yihiin kuwo kala aragti duwan oo aan isku fikir ka ahayn arrimaha Mowshinada iyo doodaha dhex yaala Baarlamanka KMG Soomaaliya, laakiin waxay hadda u muuqdaan kuwo waxoogaa isku soo dhawaaday, kadib markii ay u cadaatay in laga tashay lugana ee shabeeyay qaswadayaal.
Ugu danbeyntii 24 saac aynu soo dhaafnay waxaa hoteelada magaalada Muqdisho ay kaga sugan yihiin Mudanayaasha Baarlamanka KMG Soomaaliya waxaad maqlaysaa cod sawaxan ah, iyadoo xildhibaanadu si gooni gooni ah u faqayaan xaaladaha taagan, iyadoo aysan shaki lahayn in xaalka Mudanayaashu marayo meel Qatar ah oo ALLOW Sahal ah, lamana oga xaalada sida ay ku danbeyn doonto.